Mamwe Archives - Techip RELAY
PAK inobatana naMinader mupurojekiti yayo yekuvimbisa kuchengetedza kwekudya muKribi
Ministry of Agriculture and Rural Development (Minader) uye Autonomous Port yeKribi (PAK) ichangosaina chibvumirano chekuvandudza chirongwa cheGreen Belt chakatenderedza Kribi. Ichi chirongwa chine chekushandisa ...
Carne Asada Lorenza Recipe - NYT Kubika - New York Times
Kwemazana emakore, Sonoran carne asada tacos vane tsika yakaunganidzwa mufurawa yefurawa. Nekudaro, chibage chinotakurwa, chakarungwa uye chakakanyikwa pane imwechete iyo inobika uye nemwaka nyama, yakawedzerwa kumusanganiswa,…
Kwete, vhidhiyo inoratidza nzou inodzingirira imbwa uye vanhu mudondo havana ...
Kubva musi waChikunguru 22, 2020, vhidhiyo inoratidza nzou yakatsamwa ichidzinga vechidiki uye imbwa dzanga dzichiita kutenderera pama social network. Ichi chiitiko zvichienderana nevamwe vashandisi veInternet vakapfurwa muCameroon. Takatarisa…
COVID-19: Rume rinonyima vana makumi masere ezana ekutemera
Vana vanosvika makumi masere ezviuru vasina kuvharwa gore rino semhedzisiro yenhau dzenhema uye dzeCOVID-80,000 dzinoenderana nerunyerekupe, vatungamiriri vePublic Health vanodaro. Nhamba idzi dzakaziviswa panguva yekutsikiswa kwemazuva ese paCOVID-19, kuCamer ...
UN: "Disarmament Exercise" inouraya makumi manomwe muSouth Sudan
UN yakati mhirizhonga yakatanga ne "disarmament Exercise" chikamu chemubatanidzwa wenyika munguva pfupi yapfuura. Vanosvika makumi manomwe vanhu vakaurayiwa uye gumi nevaviri vakakuvara mukupokana kwevhiki pakati…
Coronavirus Live Kuzivisa: Pasi Pose Nyaya Dzinosvika Mamirioni makumi maviri - New York Times
Chirairo cheRussia chinoshanda 'zvakaringana,' President Putin vakadaro. Asi harisati rapedza Phase III bvunzo.A Russian Russian hutongi wezveutano hwave wekutanga munyika kubvumidza vaccine ye coronavirus, Mutungamiri Vladimir V.…
dhata yekutsigira zvirinani kusimudzira nzvimbo
Iyo yakakosha Inter-manisiputa Equipment uye Kupindira Fund (Feicom) kubva ikozvino ichaburitsa ruzivo rwehuwandu uye hurukuro pamusoro ezvinyorwa zvine chekuita nebudiriro yenzvimbo. Ruzivo urwu ruchazoparadzirwa ...
TCS: Mukadzi mune purezidhendi
Annie Noèlle Bahounoui Batende ndiye purezidhendi mutsva we Special Criminal Court, TCS. Varume vatsva vanosvika kumusoro kwemakamuri eDare Repamusoro. Annie Noelle Bahounoui Batende atonakidzwa nembiri ye…
VaDonald Trump vane tarisiro yekutsigira chikamu chefossil fuel!
ALEXIS WAYAN Nyamavhuvhu 11, 2020 0
Pasati papera mwedzi mitatu sarudzo dzemutungamiri wenyika dzaNovember 3 muUnited States, VaDonald Trump vane tarisiro yekutsigira chikamu chefossil oil. Zvinoenderana neWall Street Journal, muridzi weiyo White House anofanira kubvumidza mune…
Coronavirus Kurarama Kwekupedzisira - Iyo New York Times - New York Times
Hurukuro dzakavharwa. VaTrump vapa mirairo. Asi maAmerican havasati vaziva kuti runyararo ringauya riini.Americans yakarova zvakanyanya neiyo coronavirus kuderera kwezvemukati havana kuona zororo pamberi paMuvhuro sekutungamirwa kwemutungamiriri wenyika kwakaziviswa neMutungamiriri Trump pamusoro…
1 2 3 ... 132 chinotevera